Ixabiseka nini i-SEO eyi- $ 100 yezigidi? | Martech Zone
NgoLwesibini, Julayi 20, 2010 NgeCawa, Oktobha 30, 2011 Douglas Karr
Ukuza kuthi ga ngoku, andiqinisekanga ukuba ndifumene iphepha elimhlophe elineenkcukacha ngakumbi xa kuthelekiswa ixabiso lokuphuculwa kweinjini yokukhangela de kube kufundwa le Ncwadana, Ungalixabisa njani i-SEO. Kukho ezinye iisayithi eziye zaphuhlisa amaphepha amhlophe afanayo, kodwa eli lixesha lokuqala endikhe ndayibona icaciselwa umntu one-MBA ukuba ayiqonde ngokupheleleyo.
Olu xwebhu luhamba nakowuphi na umfundi, kusetyenziswa ispredishithi kunye nezixhobo zasimahla ezifumaneka kuGoogle, ukuhlalutya nokubala ixabiso lokufumana inqanaba. Okubandakanyiweyo kwiphepha elimhlophe zezi:
Ukuxabisa I-SEO njengohlalutyo lweComp
Yonyaka Ixabiso lePhepha lokuqala kuDweliso lukaGoogle
Yonyaka Ixabiso lokuBekwa kwePhepha lokuQala Kuzo zonke iiNjini zokuKhangela
Yonyaka Ixabiso le-Long-Tail Ukwahlulahlulahlulahlulahlulahlulwa kwinqanaba
Ukuxabisa Ixesha elide leMvelo Ukwahlula
Ukubala Ixabiso langoku yamanqanaba okuqala ePhepha
Ngaba wakha wazibuza ukuba lixabiso lonyaka lokuqala lePhepha kuGoogle ekusekweni kwekota enokhuphiswano olunje I-inshorensi yempilo? Njani $7,471,194 isandi? Yiyo kanye le nto iya kubiza, nangona kunjalo, ukubhida kunye nokuphumelela iintengiso ezaneleyo ukufumana inani elifanayo lokundwendwela ngonyaka (840k kwi- $ 8.90 ngokunqakraza). Inkqubo ye- Ixabiso leMinyaka emiNesihlanu eliNikezelweyo ngoku ishukumisa elo nani phantse $100,000,000. (Kuya kufuneka ufunde iphepha elimhlophe ukuze uqonde ukuba kutheni kuvavanyo oluchanekileyo).
I-SEO yakho isenokungabaluleki kangako, kodwa lixesha lokuba uyeke ukucinga ngokusebenza kweinjini yokukhangela njengenye indleko zentengiso kwaye uqale ukuyixabisa njengotyalo-mali olunokujika inkampani yakho ijikeleze- ngakumbi kuqoqosho.
The Utyalomali oluqikelelweyo ukuba inkampani ifumane inqanaba lokuqala lephepha I-inshorensi yempilo is $ 200,000 kunyaka wokuqala kunye ne- $ 50,000 ngonyaka emva kokugcina inqanaba. Intle kakhulu ukubuya kutyalo mali kunye neqhezu leendleko zento enokuyithatha ukufumana kwa-traffic efanayo kwimidiya yesiko.
Khuphela i-Whitepaper ukusuka kwiSlingshot SEO.
Jul 21, 2010 ngo-9: 57 AM
Eyona nto ndiyithanda kakhulu malunga ne-SEO whitepaper kukuba uthelekiso oluthe ngqo lusetyenziswa eyona ndlela inokwenzeka - Adwords. Apho unokuthi wenze ngokwenyani amaphulo akho e-Adwords, yindleko eqhubekayo. Eli phepha lilinganisa ezo zitshoneyo, iidola zokuthengisa ngaphambili kwaye intlawulo iya kuba nini.
Eli phepha liphakamisa ixabiso elishiyekileyo lenqanaba eliphezulu lezinto eziphilayo, nangona kunjalo ishishini kusafuneka licinge ngenani lamacandelo asezantsi ngakumbi kunye nendlela ezichaphazela ngayo ukuhlawulwa kwemali engenayo;
% yabangeneleli abaguqulela emva kokucofa
Ixabiso lobomi baloo mthengi
Yeyiphi imigaqo enenqanaba le-#1 eliya kubangela ukuthengiswa
Masithi unexabiso ekujoliswe kulo kakhulu, elinyanzelisayo kwaye ufikelela kwixabiso elincomekayo le-35% lokuguqulwa (likhokelela ekuthengisweni) xa umsebenzisi efike kwelo phepha lokufikela - Ngoku malunga ne-7.5 yezigidi zeerandi uhlalutyo lwe-2.6 yezigidi endaweni yoko.
Into enkulu malunga ne-SEO ye-Slingshot, kunye negalelo ekukhuleni kwabo okukhulu, kukuba baya kubajikisa abathengi xa uqikelelo loluhlu lwezinto eziphilayo kunye nesiphumo sentlawulo singenzi ngqiqo.